४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन नभएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी खोल्नैपर्ने ! « Ok Janata Newsportal
४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन नभएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी खोल्नैपर्ने !
१३ माघ २०७७, मंगलवार
काठमाडौं । यतिबेला सत्तारुढ दल नेकपा विभाजित छ । नेकपाका दुई पक्षले आ–आफ्नै दाबी प्रस्तुत गर्दै आफूहरु आधिकारिक भएको बताइरहेका छन् । तर, निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्णयले भने दुवै उत्साहित देखिन्छन् ।
ओली पक्ष दाहाल–नेपाल पक्षलाई आधिकारिकता नदिएकोप्रति खुसी छ भने दाहाल–नेपाल पक्ष ओली पक्षका केन्द्रीय सदस्यलाई मान्यता नदिएकोमा खुसी छ । तर निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्णयले ओली पक्षलाई चुनौती थपिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले तत्कालीन नेकपाको ४४१ जना केन्द्रीय सदस्यलाई नै मान्यता दिइसकेको छ । ४४१ जनाको जता बहुमत हुन्छ सोही निर्णय आधिकारिक हुने बाटो पनि खुलेको छ । यसअघि दुवै पक्षले आआफ्ना केन्द्रीय सदस्यलाई अद्यावधिकका लागि निर्वाचन आयोगमा पठाएका थिए । अद्यावधिक भएर आउँदा नेकपाका ४४१ नै वैधानिक केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
अहिले नेकपा दाहाल–नेपाल पक्षले अध्यक्ष बनाएका माधवकुमार नेपाल र ओली पक्षले नियुक्त गरेका १५०१ केन्द्रीय सदस्यलाई आयोगले मान्यता दिएन । पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनपछि भएका हरेक गतिविधलाई आयोगले मान्यता दिएको छैन । अब, सिंगो नेकपा नै आधिकारिक पार्टी भएको छ ।
अब, पार्टी विभाजन गर्नका लागि पनि विधानतः ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको सहमति चाहिन्छ जुन ओली पक्षसँग छैन । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी विभाजनका लागि ल्याएका अध्यादेश यसैको लागि रहेको प्रमाणित भएको छ । यद्यपि त्यो अध्यादेश पार्टीको दबाबपछि खारेज भएको थियो । उनले पार्टी विभाजन गर्न पार्टीका ३० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र संसदीय दलमा आवश्यक नपर्ने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए ।
४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको पनि सहमति नपाएपछि ओलीले नयाँ पार्टी खोल्नुपर्ने हुन्छ । अन्ततः उनको यहीँ विकल्प छ । अब, नेकपा दाहाल–नेपाल पक्षले गर्ने हरेक निर्णय मान्य हुने पछिल्लो निर्वाचन आयोगको निर्णयले देखाएको छ । किनकी बहुमत केन्द्रीय सदस्य दाहाल–नेपाल पक्षसँग छ ।
एक पूर्व निर्वाचन आयुक्तका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको र उनका पक्षका नेताको दाबी फगत रहनेछ । सोमबार एक नेकपा ओली पक्षका नेताले बोलेको विषयमा ती आयुक्तले भने, ‘आधिकारिक नेकपा त्यो हुन्छ जो सँग बहुमत छ, अर्कोले नयाँ पार्टी गठन गर्नुपर्छ ।’
देउवाले टुंग्याए पदाधिकारी, पौडेललाई सभापति छान्नै पिरलो
अध्यक्षलाई उपाध्यक्षले किक हान्दा दुईवटा दात गायब
शेखर कोइराला साझा उम्मेदवार, पौडेल पक्षको आज बैठक
शशांक कोइरालाले छोडे सभापतिको दाबी, यस्तो बन्यो सहमति
भोलि देशैभर सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय (सूचनासहित)
बुधबार सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय
एमालेमा रावल र भुसाललाई दिइयो यतिठूलो जिम्मेवारी
ओलीको दौडधुप : घनश्यामलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी, बामदेवलाई कोटा
सरकारबाट बाहिरिने माओवादीको घोषणा
कक्षा १२ मा शान्ता फेल, करिश्मा पास